यो बजेट हैन एमालेको घोषणापत्र, सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँड्न खोजियो : डा. बाबुराम भट्टराई
गृहपृष्ठ » समाचार » यो बजेट हैन एमालेको घोषणापत्र, सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँड्न खोजियो : डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ बजेटलाई सत्तारुढ दलको घोषणापत्र भन्नु भएको छ ।
उहाँले सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँड्न खोजेको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सालको बजेटबारे प्रतिक्रिया पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले नहुने चुनावलाई ध्यानमा राखेर एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभएको छ, ‘अर्थमन्त्री मार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइएन ।
सिधासादा मतदातालाई ललीपप बाँडेको देखियो । पपुलिज्ममा पनि खासै सिर्जनात्मकता देखिएन । उनै घिसेपिटेका नारा र कार्यक्रम भेटियो । एउटै नयाँ कुरा एमालेले गोरखामा कुनै उमेदवार नउठाउने बुझियो !’